Washington Post: Askarta Kenya waxay sas ka qaadeen dagaalka Soomaaliya | Biyoguurenews.com
Home Faallooyin Washington Post: Askarta Kenya waxay sas ka qaadeen dagaalka Soomaaliya
Washington Post: Askarta Kenya waxay sas ka qaadeen dagaalka Soomaaliya
Wargeyska The Washington Post ee ka soo baxa dalka Maraykanka ayaa waxaa uu qoray maqaal uu cinwaan uga dhigay “askarta Kenya waxaa sas ku riday dagaalka uu Maraykanka taageero ee Soomaaliya”.
Maqaalka Wargeyska waxaa uu ku billaabay in Maraykanka uu dagaalkiisa Al-Shabaab kaga qeyb-qaato duqeymaha cirka, isagoo adeegsanayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, balse koonfurta Soomaaliya waxaa jidgooyooyin ku leh ciidammo ka soo jeedo dalka Kenya ee katirsan AMISOM, kuwaas oo inta badan la bartilmaameedsado.
Waxaa ciidankaasi ka mid ahaan jiray, Christopher Katitu, sarkaal darajadiisu hooseyso oo muddo labo sano ah ku sugnaa Soomaaliya, ka hor inta uusan dhicin weerarkii lagu qaaday Jaamacdda Garissa, markaas oo loo soo diray inuu habeen iyo maalinba waardiyo ka qabto waddo weyn oo ku taalla magaalada Gaarisa oo xilligaasi ay xiisad ka taagnayd.
Culays badan oo soo foodsaaray kaddib, Katitu wuu is celin waayay, oo dhibaatadii ayaa maskaxdiisa ka tanbadisay, militarigana halkii ay u diri lahaayeen dhakhtar dhimirka qaabilsan, way xireen wayna ciqaabeen.
“Adduunka oo dhan mugdi ayuu ila noqday,” ayuu yiri isagoo ku sugan beer uu ku leeyahay degaan bariga kaga began Nairobi, “waxaan ogahay oo keliya ayaa ah waxay dadka ii ga sheegeen toddobaadyadii la soo dhaafay, oo ahayd in aaan ku hadaaqayay ereyada “waa qarax, waa Soomaali iyo wax la mid ah”, waxaan is leeyahay markaad xarada militariga ka soo baxdid umbaad ogaaneysaa dhibka ku haysto inta uu la egyahay,”
Dhibaatadan Katitu oo keliya kuma eka, oo waxaa la qabo askar badan oo reer Kenya ah. Markii uu shaqada ku laabtay dhibkaas kaddib, shaqadii ayaa laga joojiyay, labo sano ayaana la xiray. Qoyskiisa war uma hayan halka uu jiray muddadaas labada sano ah ee uu xirnaa.
Wuxuu Katitu Wargeyska u sheegay in hal sano oo keliya ay uga harsaneyd in uu u qalmo howlgabnimo.
Gaashaanle Lucy Mukuria, waxay noqotay qofkii ugu horreeyay ee ka shaqeeyo qeybta cudurrada dhimirka ee ciidammada Kenya, waxay ka sheekeyneysaa dhibtii iyada lafteeda soo gaartay, “Maalmo ayaan jiifay, oo aan ka fakarayay meydkii la is dulsaaray ee isku uray ee dixiriga galay, kuwaas oo lagu soo qaaday boorsooyin dhinac ka furnaa,” ayay tiri,
Waxay Lucy Mukuria sheegtay in dhibaatada ugu weyn ay ka soo gaartay weerarkii Ceel Cadde. “Meydadka waxaa lagu keenay baabuurta xamuulka, intaas wixi ka dambeeyayna waxba ma uriyo,” ayay raacisay Lucy Mukuria.
Haatan Lucy Mukuria waxay ka walwalsan tahay ilaa 800 oo askeri oo uu ku dhacay cudurka dhimirka, kuwaas oo militariga ay ciqaabeen halka ay caawin lahaayeen.
Lucy Mukuria waxa kale oo ay sheegtay in aan talooyinkii ay soo jeedisay aanan la dhageysan, markii dambena ay isaga tagtay shaqadii.
Tan iyo markii ay Kenya ku biirtay dagaalka Soomaaliya, wuxuu Maraykanka siiyay dhaqaale badan, balse ma muuqato in dhaaqalaahaasi qaarkii loo adeegsaday in lagu daweeyo askarta uu ku dhacay cudurrada dhimirka ee ka dhashay dagaalada.
In kastoo mas’uuliyiinta militariga sheegayaan inay arrintaasi wax weyn ka qabteen ayaa haddana askartii hore ee milateriga Kenya waxay sheegayaan wax ka duwan hadalka dowladda.
Dalka Kenya oo ay adagtahay in laga hadlo arrimaha ciidanka ayaa waxa taasi ka daran cudurrada dhimrka ee ku dhaca ciidanka dowladda.
Sideed sano ayaa haatan laga joogaa markii ciidammada Kenya ay gudaha u galeen Soomaaliya, howlgalkaas oo boqolaal askar lagaga dilay Kenya. Ururuka Al-Shabaab ayaa wixii intaasi ka dambeeyay waxay weerarro ka geysteen gudaha Kenya iyo saldhigyo milateri oo ciidaanka Kenya ay ku leeyihiin gudaha Soomaaliya.
Kenya waxaa Soomaaliya ka jooga ilaa 4,000 oo askari, taas oo shan meelood hal ka ah ciidammada Midowga Afrika ee Soomaaliya ku sugan.
Previous articleWariye katirsan BBC-da oo qaati ka taagan Al Shabaab
Next articleWaa tuma fannaanadda Soomaaliyeed ee ruxday masraxyada Yurub?